Musharaxiin isku raacday ineysan ka qeyb galin doorashada madaxtinimo ee Jubbaland – Bandhiga
Musharaxiin isku raacday ineysan ka qeyb galin doorashada madaxtinimo ee Jubbaland
Qaar ka mid ah Musharaxiinta xilka Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa ku dhawaaqay in ay sameysan doonaan guddi doorasho oo ka madax banaan kan Jubbaland ee Shaqada doorashadda ku howlan.
C/rashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah Musharaxiinta Jubbaland ee isbadal doonka ag ayaa waxaa uu ka horyimid jadwalka ay soo saareen Guddiga Doorashada, ee ku aadan odayaasha la sheegay inay soo xulayan Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland.
Musharax C/rashiid Maxamed Xidig iyo musharaxiinta kale ee mucaaradka ayaa isku raacay inaysan ka qaybgalin doorashada, illaa iyo inta wax laga bedelayo liiska ay ku qoran yihiin odayaasha la sheegay inay Xildhibaanada soo dooranayaan.
“Diyaar uma nihin inaan doorashada kaga qaybgalno jadwalka uu soo saaray Guddiga Doorashada Jubbaland. Musharaxiinta oo hal dallad ku midowbay wuxuu go’aankoodu yahay inaysan ka qaybgalin doorashada, illaa iyo inta laga soo celinayo dhaqanka saxda ah.” Ayuu yiri Xidig isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada Kismaayo
Doorashada Madaxtinimada Jubbaland ayaa 15-ka bisha August ee sanadkan waxaa lagu wadaa inay ka qabsoomto Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Waxaa doorashada isku diiwaan geliyay kaliya madaxweynaha waqtiga ka sii dhamaanayo ee Jubbaland iyo musharaxiin la sheegay inuu isaga wato, waxaana jira shirar iska soo horjeeda oo ka socda magaalada Kismaayo kuwaa oo looga hadlayo doorashada madaxtinimo ee Jubbaland.